Home Qubanaha Ayesha Khan: ‘Taliban ma oggola fannaaniinta,
Ayesha Khan waxay ku fadhisay roog caddeys ah, waxayna ku luuqeyneysay hees. Mar qura ayay si lama filaan ah u oyday, wariyaha laanta BBC-da ee Urdu, Humaira Kanwal, waxay sheegtay inay weyday qaab ay ku aamusiiso.
“Sababta aan waddankeyga uga tagay ma aha inaan ahay gabadh Muslim ah oo aan xidhanin xijaab aam jidhkeeda oo dhan qarinin,” ayay ku tidhi BBC-da.
“Waxaan dalkeyga uga tagay sabab la xidhiidha inaan ahay haweeney iyo inaan ahay fannaanad.”
Balse kiiska Ayesha, waxaa intaas usii dheer in ay tahay haweeney, kooxdanina aanay waxyaabo badan u fasixin dumarka.
“Taliban waxay nagu khasbeen inaan ka tagno xirfadaheenna,” ayay tidhi Ayesha. “Maalmahan way adag tahay inaad ahaato haweeney reer Afganistan ah, laakiin fannaannimo lama tusi karo Taliban.”
Qoraalka sawirka,Ayesha waxa ay soo caan baxday 2018-kii
Qoraalka sawirka,Ayesha waxay Taliban u direysaa farriin ay ugu sheegeyso in Afghanistan ay wada leeyihiin dadka u dhashay waddanka oo dhan
Previous articleDr Sada Mire: Aqoonyahankii koowaad Afrikaan Ah Ee Ku Guuleysta Abaal-marinta Buuggaagta SAFA
Next articleMuxuu yahay mooshinka ay gudbiyeen Xildhibaannada Wakiilladu?